टाबरनास मरुभूमि, युरोपमा उत्तर अमेरिकी पश्चिम | Absolut यात्रा
तबर्नस मरुभूमि प्रान्तमा अवस्थित छ Almeria। विशेष गरी, यो को नगरपालिका मा लगभग तीन सय वर्ग किलोमीटर को क्षेत्र कवर सान्ता क्रुज डे मार्चेना, गाडोर, जर्गल, Alboloduy र आफ्नो आफ्नै Taverns.
यो केवल एक मात्र मरुभूमि मानिन्छ युरोप, किनकि पुरानो महाद्वीपका अन्य मानिसहरूलाई मात्र मरुभूमि क्षेत्रहरूको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। यसको माटो र क्षेत्रको मौसम को रूपान्तरण, वर्षाको लगभग पूर्ण अभाव, गहिरा अमेरिकाको जस्तै शुष्क परिदृश्यलाई जन्म दिएको छ। यस कारणले गर्दा, गत शताब्दीको साठोत्तरी समयमा, तबरेनास मरुभूमि भयो फिल्म सेट लोकप्रिय को फिल्मांकन को लागी स्पेगेटी पश्चिमी। यदि तपाईं स्पेनको यो जिज्ञासु ठाउँ अझ राम्रोसँग जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई हामीसँग सामेल हुन आमन्त्रित गर्दछौं।
1 ट्याबर्नस मरूभूमिमा के हेर्ने
1.1 एक शानदार भौगोलिक परिदृश्य
1.2 टबर्नस मरुभूमिको वनस्पति र जीवजन्तु
1.3 बेंसीबाट झुण्डिएको एउटा शहर तपाईले शोरबास गर्नुभयो
1.4 टेरेरा भेन्चुराको शहर
1.5 तबर्नस, मरुभूमिलाई आफ्नो नाम दिने शहर
1.6 पश्चिमी शहर
1.7 अन्य शहरहरू तबर्नास मरूभूमि नजिकै
2 यो मरुभूमिमा जान कहिले राम्रो हुन्छ
3 कसरी तबेर्नास मरुभूमिमा पुग्न
4 टबरनासको विशिष्ट पेट्रोनोमीको एक बिट
ट्याबर्नस मरूभूमिमा के हेर्ने
ठीक पश्चिमी शहरहरू माथि उल्लिखित फिल्महरूको चित्रीकरणका लागि निर्मित शहरहरू ट्याबर्नस मरूभूमिले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्ने आकर्षणहरू मध्ये एक हो। तर यो कोटि पनि छ प्राकृतिक क्षेत्र यसको अद्वितीय भौगोलिक संरचनाको लागि र अन्य चासोको स्थानहरू छन्। तिनीहरूलाई तपाइँलाई देखाउनुहोस्।
एक शानदार भौगोलिक परिदृश्य
टेबर्नास मरुभूमिको यसको अस्तित्व रहेको छ कि यसको वरिपरि छ अल्हमिलाको पहाड, फिलाम्ब्रेस र Alpujarra Almeriense। यी भूमध्यसागरको चिसो हावामा प्राकृतिक बाधाको रूपमा काम गर्दछन्।
बदलेमा, यी सबै गर्न को लागी आएको छ सबै यूरोप मा एक सूखा क्षेत्रहरु। र साथै विशाल मूल्यको प्रामाणिक भौगोलिक पार्कमा। यो रम्बलास र पुरानो स्ट्रिमहरू मिलेर बनेको छ जसले तथाकथितको विशिष्ट परिदृश्यलाई प्रतिक्रिया दिन्छ badlands वा फोहर भूमिहरु। यसैले क्यानियनहरू, खोलाहरू र विशिष्ट परी चिमनीहरू यस इलाकामा प्रशस्त पाइन्छन्, ती टुक्राहरू जुन मोहरी प्राकृतिक स्तम्भहरू जस्तो देखिन्छन्।
टेबर्नस मरुभूमिमा फ्लोरा
टबर्नस मरुभूमिको वनस्पति र जीवजन्तु
तर्कसंगत रूपमा, वनस्पति Tabernas मा दुर्लभ छ। यद्यपि यसले वैज्ञानिक रूपमा चिनिने एक स्थानीय प्रजाति प्रस्तुत गर्दछ इजोमोडेन्ड्रन बुर्जियन। यो एउटा सानो जडिबुटी हो जुन जुरासिकको वास्तविक अवशेष हो।
जीव जन्तुहरूको लागि, तपाईं सरीसृपका केहि प्रजातिहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जस्तै रातो-पुच्छर छेपारो वा भर्या .्ग सर्प र स्तनपायी जस्ता खरगोश, स्याल, डोरमाउस वा हेजहगहरू। तर सबै भन्दा माथि, तबर्नस मरुभूमि छ चराहरूको लागि विशेष संरक्षण क्षेत्र। ती मध्ये शाही स्विफ्ट, रक प्लेन, ज्याकडाउ, तुरही बुलफिंच वा कर्ल्यू प्रशस्त छन्।
टाबरनास मरुभूमिको प्रकृति जान्नको लागि हामी तपाईंलाई धेरैलाई एउटा भाँडामा राख्न सल्लाह दिन्छौं भ्रमण क्षेत्रमा प्रस्ताव गरियो। तपाईं घोडाईब्याक, पैदल यात्रा वा x x ab मा सवारको बीच रोज्न सक्नुहुन्छ।
तर अल्मेरिया मरूभूमि यसको प्राकृतिक सौन्दर्यको हिसाबले पनि रोचक छैन। यदि तपाईं यसको भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, तपाईं पनि केही रोचक स्थानहरू र स्मारकहरू देख्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन हामीले तपाईंलाई देखाउँदै छौं।
बेंसीबाट झुण्डिएको एउटा शहर तपाईले शोरबास गर्नुभयो
यो सानो सेतो शहर एकदम अचम्मको छ। यो रूप मा परिचित छ Small सानो बेसिन » किनभने तिनीहरूको घरको एक राम्रो अंश यसबाट झुण्डिएको जस्तो देखिन्छ Afa खोला। तर तपाई यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ सभा गृह र त्यो पनि कृषि चेम्बर, दुबै १ th औं शताब्दीमा र एक एक्लेक्टिक शैलीमा निर्मित; को अल्बाको ड्यूकको घर, १ beautiful औं शताब्दीको एक सुन्दर neoclassical दरबार, र अरब ओभनशहरको पुरानो भाँडा बनाउने उद्योग।
सोर्बास अल्मेरिया प्रान्तमा मुख्य भाँडो केन्द्र थियो। तसर्थ, यदि तपाइँ टेबर्नस मरूभूमिमा तपाइँको यात्राको स्मारिका लिन चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई यी बहुमूल्य टुक्राहरू मध्ये एउटा किन्नु सल्लाह दिन्छौं, ती मध्ये केही पाइप पिचर वा मोजाकरा जस्ता अनौंठो।
यसको धार्मिक स्मारकहरूको रूपमा, तपाईंसँग सान्ता मारियाको चर्च, जसको टाउको बारोक छ, यद्यपि यसको भित्री भाग मुडेजर शैलीमा छ र यसको नियोक्लासिकल एफएड छ। तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ फातिमाको हाम्रो लेडीको हर्मिटेजेस र को सैन रूक। यसको नव-गोथिक वेदीपट्टि पछिल्ला घरहरू सन्तको सानो छवि हुन्छन् जसलाई यसको नाम दिइएको छ जसको नामले चिनिन्छ «सान रोक्किलो».
गाउँ बाहिर तपाईंसँग छ Yesos de Sorbas प्राकृतिक पार्क, एक प्रभावशाली कारस्ट जटिल भूमिगत ग्यालरी को धेरै किलोमिटर बाट बनेको यसको प्रकोप द्वारा नै यसको सनक मा बनाईएको।
टेरेरा भेन्चुराको शहर
तबर्नासको मरूभूमिमा तपाईं यो भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ ढिला Neolithic साइट बीसौं शताब्दीको सुरूमा पत्ता लगाइयो। यसमा फेला परेका धेरै चीजहरू अल्मेरिया र म्याड्रिडको पुरातात्विक संग्रहालयहरूमा सारिएको छ, तर तपाईं अझै भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ व्याख्या केन्द्र, जहाँ तपाईं क्षेत्र को ती आदिम बासिन्दाहरूको जीवन मार्ग को बारे मा धेरै उत्सुक तथ्यहरु छन्।
तबर्नस, मरुभूमिलाई आफ्नो नाम दिने शहर
साथै टाबर्नस मरुभूमिलाई यसको नाम दिने शहर तपाईंको भ्रमणको योग्य छ किनकि यसले तपाईंलाई धेरै आकर्षणहरू प्रदान गर्दछ। यो पुरानो मुस्लिम शहर यूरोप मा एक शुष्क स्थान हो। यसको राम्रो प्रमाण त्यो हो Almería सौर प्लेटफार्म, संसारमा ऊर्जा को यस प्रकार मा एक सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान केन्द्रहरु।
तर यो उनको हेर्न अधिक रोचक हुनेछ चर्च अफ अवर लेडी अफ अवतार, १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्मित र सांस्कृतिक चासोको साइट घोषित गरियो। यसको मुख्य बेदीमा, तपाईं यसको छवि पनि देख्न सक्नुहुन्छ दु: ख को कुमारीशहरको संरक्षक।
र, सबै भन्दा माथि, तपाईं Alcazaba वा जानु पर्छ टाबरनास महल, ११ औं शताब्दीको नासारिड किल्ला जुन आंशिक रूपमा ध्वस्त पारियो, तर जसमध्ये अझै केही बाँकी छन्। सांस्कृतिक चासोको सम्पत्ति पनि घोषणा गरियो, यसको वरिपरि ए छ पौराणिक कथा इलाकामा यसले भन्छ कि यससँग धेरै गोप्य अंशहरू छन् जुन यसलाई टेबर्नासमा रम्ब्ला डे ओस्केयर जस्ता विभिन्न ठाउँहरूसँग जोड्दछ। यद्यपि त्यस्ता कुनै सुरु foundहरू फेला परेनन्। यो विश्वास गरिन्छ कि ती इसाईहरूसँगको किल्ला हराउँदा उनीहरू मुर्साहरूले उडाए।
हामीले तपाईलाई भनेको सबै कुराको बाबजुद पनि, सायद तबर्नस मरुभूमिको सबैभन्दा लोकप्रिय आकर्षण पश्चिमी शहर हो जुन हामी पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं स्पेगेटी पश्चिमी पछिल्लो शताब्दी को साठ को दशक मा।
यो हाल एक थिम पार्क भनिन्छ Oasys MiniHollywood र योसँग एक सानो चिड़ियाघर र एक पानी पार्क छ, जो मरुभूमिको बीचमा तपाईंलाई अचम्मित पार्न रोक्दैन। तर यसको चासोको ठूलो ध्रुव पश्चिमी क्षेत्रको शहर नै हो।
सुरुमा यो अनुहार मात्र बनेको थियो तर पछि यसका धेरै भवनहरू पूरा भए। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ शेरिफ, टेलिग्राफ र बैंक कार्यालयहरू, क्यान्टिन, र अन्त्येष्टि घर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि दुई छन् संग्रहालयहरू, सिनेमा र कारहरू।
तपाईं पनि एक हेर्न सक्नुहुन्छ "सूर्य मा डुएल" विशेषज्ञहरू अभिनय गर्दै र क्यान्कनाको साक्षीको वास्तविक काउबय जस्तै महसुस गर्दै नाचहरूको शैलीमा जुन रातमा रमाइलो गर्‍यो। जंगली पश्चिम। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि तपाईं यस विधाको सिनेमाको प्रशंसक हुनुहुन्छ भने तपाईं त्यस्ता परिदृश्यहरू चिन्तन गर्नुहुनेछ जहाँ 'द गुड, द कुचली र नराम्रो' वा 'मृत्युको मूल्य' जस्ता फिल्महरू शट गरिएको थियो।
यो पश्चिमको एक मात्र शहर होइन जुन मरूभूमिमा सुरक्षित छ। तिनीहरू पनि छन् फोर्ट ब्रावोजहाँ भारतीय शिविरहरु पनि अभाव छैन, र पश्चिमी लियोन खेत, जो पनि शो प्रदान गर्दछ।
अन्य शहरहरू तबर्नास मरूभूमि नजिकै
जहाँसम्म तिनीहरू ट्याबर्नस मरूभूमिमा ठ्याक्कै छैनन्, त्यहाँ नजिकैका अन्य शहरहरू पनि छन् जुन तपाईंको भ्रमणको लागि योग्य छन्। ती मध्ये एक हो AlboloduyAlpujarra Almeriense को एक सुन्दर सेता शहर, जसको सान जुआन बाउटिस्टाको चर्चशैलीमा नियोक्लासिकल, यो १ the औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो।
र हामी तपाईंलाई भ्रमण गर्न सल्लाह दिन्छौं जर्गल, जसमा यसको प्रभाव पार्ने महल, एक धेरै राम्रो संरक्षित ढिलो मध्ययुगीन रक्षात्मक किल्ला। र त्यस्तै हाम्रो लेडी अफ कार्मेनको चर्च, मूरिश विद्रोहको समयमा नष्ट गरियो र १o औं शताब्दीमा बारोक र मुडेजर शैलीहरूको संयोजनमा पुनर्निर्माण गरियो।
यो मरुभूमिमा जान कहिले राम्रो हुन्छ
यद्यपि ट्याबरनास मरुभूमि ग्रहको अन्य शुष्क क्षेत्रहरूको उच्च दिनको तापक्रममा नपुग्दा पनि ग्रीष्म veryतुमा धेरै तातो हुन्छ। अर्कोतर्फ, जाडो, जब घाम अस्ताउँछ, चिसो हुन्छ। त्यसकारण हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले यो स्थानको भ्रमण गर्नु भएको छ वसन्त, जब तापमान हल्का र अधिक रमाईलो हुन्छ।
कसरी तबेर्नास मरुभूमिमा पुग्न
टाबरनास शहरबाट करीव तीस किलोमिटर टाढा अवस्थित छ Almeriaप्रान्तको राजधानी। मरुभूमिमा जानको लागि, तपाईंसँग छ बसहरु कि तिनीहरू सोरबास वा तबर्नासमा जान्छन्। तिनीहरू Almería इन्टरमोडल स्टेशनबाट छोड्छन् र धेरै दैनिक आवृत्तिहरू छन्।
तर तपाई आफ्नै कारमा पनि यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। सडकहरू उसको लागि डोर्याउँदछन् एक-92 र, पछि, एन ३४० ए जुन धेरै इलाकाको छेउमा जान्छ जुन मरुभूमिमा यसको नाम दिन्छ।
टबरनासको विशिष्ट पेट्रोनोमीको एक बिट
अन्तमा, तबर्नास मरुभूमिको हाम्रो यात्रा समाप्त गर्न हामी यस क्षेत्रको विशिष्ट मेनू प्रस्ताव गर्दछौं। किनभने कुनै ठाउँ यसको ग्यास्ट्रोनोमी कोशिस नगरीकन पूर्ण रूपमा थाहा छैन। तपाईं केहि संग आफ्नो खाना सुरु गर्न सक्नुहुन्छ crumbs वा प्लेट गरिएको नामको साथ "सराई", जुन रताउटोइल जस्तो देखिन्छ जुन अन्यत्र पकाइएको छ। यसमा टमाटर, मरिच र प्याज जैतूनको तेलमा साटाइन्छ र कालो हलिया र अन्य सुँगुर उत्पादनहरू सहित।
तपाईले अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आलु लसुन, संयुक्त राष्ट्र गाजापाचो वा केहि गुरुलो। र, मिठाईका लागि, तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ सुंगुरको मासुले केक राख्दछ, the Calatrava रोटी वा बुनाई डोनट्स। पिउन को लागी, मिसटेला.
अन्त मा, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, टेबर्नस मरुभूमि तपाईंलाई प्रस्ताव गर्नको लागि धेरै छ। यसको आकर्षणहरू मध्ये एक अद्वितीय प्रकृति, स्मारकहरूको साथ सुन्दर शहरहरू, सेटिंग्सको विशिष्ट हो अमेरिकी पश्चिम र राम्रो पेट्रोनोमी। अब आफ्नो यात्रा बुक गर्नुहोस् र यस ठाउँलाई अल्मेरिया प्रान्तमा जान्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » तबर्नास मरुभूमि